Izinzuzo Zokukhokhela Isikweletu Sezinhlangano - Thola Imalimboleko Yebhizinisi
Izinkampani Ezihlanganisiwe zinikezela okuphelele kakhulu Ukwakha Izikweletu Kwenhlangano Uhlelo enzelwe amabhizinisi angempela enza umsebenzi webhizinisi langempela. I-Corporate Credit iyithuluzi elinamandla kosomabhizinisi kanye nomnikazi webhizinisi elincane. Ungabona izinzuzo ezinyangeni, kunokuba kube yiminyaka, uma usungula iphrofayili yesikweletu sebhizinisi ngokusebenzisa Izinkampani Ezihlanganisiwe. Nawa amanye amaphuzu okufanele acabangele ukusebenzisa Uhlelo lwethu Lokwakha Izikweletu:
I-Corporate Credit ihlukanisa isikweletu sebhizinisi nesomuntu uqobo futhi iqinisa iveyili yenkampani enikezwe ukufakwa
Amakhasimende ethu ngokuvamile athola isilinganiso sebhizinisi sezikweletu se-75-80 noma kangcono, futhi amakhasimende angaqedela lolu hlelo ngezinsuku ze-90-150
Sinikeza amakhasimende ethu ukufinyelela izinkampani ezinikeza inkampani yakho isikweletu. Sine-1,000's yezinkampani kuhlelo lwethu lwesikweletu lwebhizinisi olunikeza izikweletu nemigqa evulekile yesikweletu ngaphandle kokusebenzisa isiqinisekiso somuntu siqu noma isheke lesikweletu sakho
Amaklayenti ethu amaningi athola "Amakhadi Okuthenga Okuthenga" ukuze asetshenziswe ngaphansi kwenhlangano yawo noma inkampani ngaphandle kwamasheke wesikweletu akho
Ukwakha isikweletu senkampani kungavula iminyango eminingi yokuqhuba ibhizinisi lakho, ukuthola imalimboleko nokuqashisa, ngaphakathi kwenani lezezimali lenhlangano yakho, futhi konke lokhu kungafinyeleleka ngaphandle kokudalulwa iphrofayili yakho yesikweletu
Amaklayenti ethu amaningi athola amazinga aphezulu empumelelo ngohlelo lwethu futhi ayakwazi ukuthenga / ukuqasha izimoto ezinkampani, imishini yamakhompiyutha kanye nezinye izimpahla zebhizinisi labo, zixhaswe imali ngaphansi kwenkampani yabo, ngokushesha
Age Shelf Corporations kanye nezinkampani abe nenani elithile lezinhlobo ezithile zamabhizinisi nezinhloso ezidinga ukuthi ibhizinisi lisungulwe iminyaka - Izinkampani ezifakiwe kunokhetho olubanzi kakhulu Ama-Shelf Corporations nezinkampani ezindala ezinezimali Esimisiwe kanjalo.
Uhlelo ngalunye lwezezikweletu lwebhizinisi luza nesiQinisekiso sokuSebenza se-100%, esisho ukuthi iklayenti lizothola ISIMEMBU ESIPHELELE uma sehluleka ukwakha iphrofayili yakho yesikweletu yenkampani. Ngokwemvelo, isiqinisekiso sincike kuwe kulandela imiyalelo yomqeqeshi wakho wesikweletu. Lokhu kungukuzama kweqembu futhi amaklayenti ethu abamba iqhaza ezinhlelweni zokwakha isikweletu.
Kunamazinga amaningi wensiza ongakhetha kuzo. Uyacelwa ukuthi ufunde amaphrofayli angezansi ukuthola ukuthi yiliphi izinga lenkonzo ongaba nentshisekelo kulo:
Ukunwebeka ibhizinisi lakhe
Ukuboleka ngaphandle kwesiqinisekiso somuntu
Isikweletu esisha iphrofayili ngaphansi kwenhlangano
Amaklayenti ethu amabili eFlorida ayefuna ukuqala inkampani yamabhasi esikole
ukuthutha izingane zisuka emakhaya ziye ezikoleni ezizimele endaweni. Baxhumana nathi sababhalisa ohlelweni lwethu lokusungula isikweletu sebhizinisi. Sikwazi ukuthola i- $ 450,000 ngezimali zokuthenga amabhasi wesikole abawadingayo ukuze bavule ibhizinisi labo. Manje sebenebhizinisi elinenzuzo enkulu ngenxa yenhlokodolobha yokuqalisa esakwazi ukuyitholela bona ngokulandela uhlelo lwethu.
Iklayenti e-Spokane, eWashington lalifuna ukwandisa ibhizinisi lakhe lokuthuthukisa indawo yokuhlala. Ubengenayo imali yokuthenga imishini edingekayo. Ubejabule kakhulu ngohlelo lwethu kanye nokuxhaswa akutholile. Usebenzise uhlelo lwethu lokwakha isikweletu senkampani ukuthola i- $ 650,000 ezimotweni nakwimishini yokwakha. Ukukhokha kwakhe izikweletu ngemishini yakhe manje sekuyingxenye yokuphuma kwakhe kwangaphambili lapho kufanele aqashe umsebenzi kwezinye izinkampani. Unemali eyengeziwe ephaketheni lakhe njalo lapho athuthukisa ikhaya.
Ukuboleka Ngaphandle Kweziqinisekiso Zakho
Kubalulekile ukulandela umthetho wegolide nokuphatha obolekayo ngendlela wena
ungafuna ukuphathwa uma ungabo. Sebenza ngokuzikhandla ukwenza ibhizinisi lakho likhule futhi lenze inzuzo enkulu futhi ubuyisele abantu ababenokholo olwanele ebhizinisini lakho ukwandisa isikweletu. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi izimo zenzeka lapho ukukhokha kunzima. Esimweni esingajwayelekile lapho lokhu kungenzeka khona, isikweletu senkampani siyathinteka futhi isikweletu sakho siqu singasala ngaphandle ku-equation, kushiye isikweletu sakho ku-akhawunti noma ungangezi isikweletu kuphrofayela yakho yangasese.
Izikweletu Zenhlangano njengendlela Engahlukile Esikweletini Somuntu
Izinto ziyenzeka. Ngesehlukaniso, ukulahleka komsebenzi noma imikhuba yezimali edinga
ukulungisa, kwesinye isikhathi isikweletu somuntu siqu akuyona into umuntu angathanda. Ngakho-ke, ungasula i-slate ehlanzekile bese uthola isiqalo esisha ngaphansi kwenhlangano. Yakha isikweletu sayo bese uthola isikweletu ngaphansi komuntu (inkampani) oyilawulayo. Ngale ndlela, uzokwazi ukuthenga izinto ozifunayo ngebhizinisi lakho, ngaphansi kwesizathu, ngaphandle kwezinselelo zakho zesikweletu ezedlule ezikuthola ngendlela yakho.
Yakha Izikweletu Zakho Zobumbano